Seychelles waxay xaday "Abaalmarinta Marathon -ka ee Tobanka ugu Quruxda Badan Adduunka"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles waxay xaday “Abaalmarinta Tobanka Ugu Caansan Dunida Xeebta Marathon”
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Sports • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Seychelles waxay xaday “Abaalmarinta Tobanka Ugu Caansan Dunida Xeebta Marathon”
Jasiiradaha Seychelles waxay ka soo muuqdeen dhacdadii loo yaqaan 'GorgeousRun global coastline marathon IP' oo ay ku bilaabatay munaasabaddii 23-kii Maajo ee magaalada Shanghai, iyadoo laga qaaday abaalmarintii "The Top Top Gorgeous Coastline Marathon". GorgeousRun waa madal isku xireysa orodyahannada Marathon-ka Shiinaha ee taga meel kale oo loo maro marathon sida Seychelles.
Seychelles Eco-Friendly Marathon waa munaasabad sanadle ah oo si caalami ah looga aqoonsado iyada oo loo marayo calaamadda Ururka Maratoonka Caalamiga ah iyo Jinsiyadaha Fogaanta (AIMS).
Kaqeybgalayaasha aduunka oo idil ayaa tartamay iyagoo ku riyaaqaya aragti dusha sare ee ujeedo qurux badan ee Seychelles.
Dhacdadan daahfurka ah waxay sidoo kale soo bandhigtay meelo kale oo ay ka mid yihiin Mauritius, Tahiti, Israel, iyo Jamaica.
Jannada jasiiradda ayaa iskaashi la sameysay GorgeousRun si ay u muujiso quruxdeeda dabiiciga ah iyo gaar ahaan raadkeeda Eco-Friendly Marathon ee orodyahannada Marathon-ka Shiinaha.
The Seychelles Eco-Friendly Marathon, oo ah dhacdo sanadle ah oo caalami ah oo laga aqoonsan yahay iyada oo loo marayo calaamadda Isbahaysiga Caalamiga ah ee Marathons iyo Distance Races (AIMS), waxay u oggolaaneysaa kaqeybgalayaasha adduunka oo idil inay tartamaan iyagoo ku raaxeysanaya aragti dusha sare leh oo ku saabsan koorsadooda.
Ka soo horjeedka xeebta pearl-cad iyo kaymaha roobka, Seychelles munaasabaddu waxay martigelisaa dhagaystayaal caalami ah oo ka mid ah maaratoon-xiisaha iyo xirfadlayaalba. Qabashada daabacaaddeedii 12aad ee 2019, Seychelles waxay diiwaangelisay tiro ka mid ah 65 kaqeybgalayaal shisheeye oo caalami ah oo ka kala yimid 28 dal.
Waxaa goobjoog ka ahaa dhacdadii GorgeousRun Marwo Sun Yingjie, haweeneyda heysata horyaalka adduunka ee Shiinaha oo orodyahan dheer ah oo horay uga soo qeybgashay marathon-ka Seychelles Eco-Friendly iyada oo loo marayo barnaamijka 'GorgeousRun'. Ms. Yingjie waxay la wadaageysay khibradeeda janada wanaagsan iyo tan Maratanka ee Seychelles Eco-Friendly Marathon iyadoo dhagaystayaasha la dhiirigalinayo kuwa kale inay ogaadaan quruxda goobta.
Agaasimaha Gudiga Dalxiiska Seychelles ee Shiinaha iyo Japan, Mudane Jean-Luc Lai-Lam ayaa faallo ka bixiyey, “Waxay ahayd xilli qof waliba u fiirsanayo sababo la xiriira dillaaca COVID-19 tanina waxay na siisay waqti aan uga fikirno caafimaadkeenna hadda. in ka badan abid. Waxaan bilownay kordhinta jimicsigayaga jimicsiga iyo kaqeyb qaadashada nashaadaadyo badan oo isboorti ah anagoo ku raadjoogna caafimaadkeena Marathon-ka Seychelles Eco-friendly wuxuu u sameeyaa barxad ku habboon booqdeyaashayada si aan u sameyno taas iyada oo aan la kulanno jasiiradeena quruxda badan. Dhanka kale dhacdada 'GorgeousRun' waxay na siinaysaa marxalad ku habboon oo aan ku gaari karno macaamiisheenna bartilmaameedka ka ah adduunka maaratoonka. ”